Madaxweynaha DFS oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Sucuudi Caraabiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha DFS oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Sucuudi Caraabiya
Madaxweynaha DFS oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Sucuudi Caraabiya. [Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Arbaco ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Sucuudigu uu u soo magacaabay Soomaaliya.
Safiir Maxamed Cabdiqani Al-khayat ayaa waxaa soo magacaabay boqorka Sucuudiga Salmaan Binu-cabdicaiis.
Xasan Shiikh ayaa safiirka uga mahadceshay imaanshihiisa Soomaaliya, waxaana uu sheegay in dolwadda Soomaaliya ay si wanaagsan u la shaqayn doonto safiirka cusub ee Sucuudiga.
Dhankiisa, safiir Maxamed Cabdiqani Al-khayat ayaa uga mahadceshay madaxweynaha soo dhaweynta, waxaana uu balanqaaday in uu kor u qaadi doono xiriirka ka dhaxeeya labada dal.
Soomaaliya iyo Sucuudi Caraabiya ayaa leh xiriir taariikhi ah, balse wixii ka dambeeyay markii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Bare sanadkii 1991-dii labada dal ayaan yeelan iskaashi balaaran, iyadoo ilaa iyo hadda safiirka Succudiga u qaabilsan Soomaaliya ay xaruntiisu kutaal magaalada Nayroobi ee caasimada dalka Kenya.
April 2, 2017 Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak oo yimid Muqdisho